Deg Deg: Natiijadii Ansixinta Dastuurka oo soo baxday -Tirada Codeesay iyo tirada Diiday (Exclusive) - iftineducation.com
Deg Deg: Natiijadii Ansixinta Dastuurka oo soo baxday -Tirada Codeesay iyo tirada Diiday (Exclusive)
iftineducation.com – Waxaa goordhaw lasoo gabagabeeyay Codbixintii loo qaadayay Ansixinta Dastuurka Cusub ee Qabyo Qoraalka Soomaaliya oo maalmahan ka doodistiisa kasocotay Iskool Buliiziyo ay ku shirsanaayeen Ergayda Ansixinta Dastuurka.
Waxaa goordhaw lagu dhawaaqay Natiijadii Codbixintii loo qaaday Dastuurka Cusub ee Qabyo Qoraalka kaa oo maanta waxii ka dambeeyay hirgalay noqonaya Dastuurka Cusub ee Qabyo Qoraalka Soomaaliya.
Prof Xuseen Axmed Warsame oo ku dhawaaqay Codeynta loo qaaday Dastuurka Cusub ee Qabyo Qoraalka Soomaaliya ayaa sheegay in Maanta waxii ka dambeeya uu Ansax yahay Dastuurka KMG ah kadib markii ay u codeeyeen tiradii ugu badneed.
Waxaan Codadka Dhiibtay oo kusugnaa Halka uu Shirka ka socday 645-Ergo waxaana u codeesay in Dastuurka la hirgaliyo 621-qof waxaa Diiday oo maya yiri 13-Qof halka 11-qof kalana ay ka aamuseen.
Waxaa hada Hoolka uu Shirku kasocdo kasoconaya Fantasyo iyo farxad ku aadan Ansixinta Dastuurka iyadoona uu goordhaw gaaray Raizul Wasaraha Xukuumada KMG ee Soomaaliya Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas iyo Qaar kamid ah Golihiisa Wasiirada.
Raizul Wasaaraha ayaana ka marqaati noqday saxiixayna marqaati kacisiisa in Ergayda ee ansixiyeen Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya oo mudo kadoodistiisa socotay.
Cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacey